Dowladda Masar oo boqolaal Tahriibayaal ku xirtay magaalada Alexandaria – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Ammaanka Masar ayaa shalay gelinkii dambe ka qab qabtay magaalada Alexandria illaa labo boqol Tahriibayaal u badan Soomaali, kadib markii ay howl galo ka sameeyeen xeebaha.
Wararka ayaa sheegaya in dadka la qabtay ay 50 ka mid ah yihiin Soomaali, waxaana la qabtay xilli ay doonayaan inay dooni ka raacaan magaalada Alexandria.
Sidoo kale waxaa dadka kale ee la qab qabtay ay u kala dhasheen dalalka Eritrea, Itoobiya, Sudan iyo Suuriya.
Ciidamada Ilaalada xeebaha Masar ayaa la sheegay inay adkeeyaan ammaanka xeebaha, kadib markii dowladda Masar ogaatay in boqolaal Tahriibayaal ah ay ku dhinteen badda u dhaxeysa Afrika iyo Yurub.
Howl galkan ayaa ku soo beegmay, iyadoo dhowaan doonyo ay la socdeen tahriibayaal tiradooda lagu sheegay illaa shan boqol ay ku degtay Badda Meditarrean-ka, kuwaasoo doonyo ka raacay xeebta Alexandria.
Masar ayaa muddooyinkii u dambeeyay noqotay meelaha qaabka tahriibka looga baxo, waxaana ay noqotay dalka labaab ee marinka u noqotay tahriibayaasha ku qul qulaya dalalka Yurub.